Win RAR အကြောင်း ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » Knowledge and FAQ , ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများ » Win RAR အကြောင်း
By နေမင်းမောင်7:59 PM13 comments
ကျွန်တော်တို့ အခု Password ခံချင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာ။ပုံလေးမှာပြထားတဲ့အတိုင်း ဒုတိယမြောက် Tab လေးဖြစ်တဲ့ Advanced ဆိုတဲ့ Tab လေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။ အဲ့ဒီကမှ Set Password ဆိုတာလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။ အဲ့ဒီမှာ မိမိတို့ပေးလိုတဲ့ Password ကို နှစ်ကြိမ်ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါ။ မမှားဖို့တော့ လိုတာပေါ့ဗျာ။ အဲ့ဒီမှာ ထည့်ပေးပြီးပြီဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ ရှေ့က Tab လေးကို ပြန်သွားပြီး OK ပေးလိုက်ရင် စပြီးခွဲပါပြီ။
အခုဆိုရင် ကျွန်တော်ခွဲထားတဲ့ ဖိုင်လေးတွေထွက်လာပါပြီ။ အားလုံးပေါင်း5ပိုင်းထွက်လာပါတယ်။ နောက်ဆုံး ထွက်လာမယ့်အပိုင်းလေးကတော့ ဆိုဒ်နည်းသွားတာပေါ့ဗျာ။ ဒီလောက်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ Win RAR ရဲ့ ဖိုင်ခွဲပုံလေးကို သိလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ ဖိုင်ဖြေတဲ့ အပိုင်းပေါ့ဗျာ။ အောက်မှာ ကြည့်လိုက်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ ခွဲတဲ့ နေရာမှာလည်း သုံးမျိုးရှိပါတယ်။ ပထမဆုံး Extract files ဆိုတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ ခွဲထုတ်လိုက်တဲ့ ဖိုင်လေးကို ဘယ်နေရာကိုတစ်ခါတည်း ထည့်လိုက်မလဲ ဆိုတာကို ရွေးပေး နိုင်ပါတယ်။ ကြည့်လိုက်ပါဗျာ။
ဒီနေရာကတော့ ကျွန်တော်တို့ ခွဲထုတ်မယ့်ဖိုင်လေးကို ထားရမယ့်နေရာကိုရွေးတာပါ။ နံပါတ်2ဖြစ်တဲ့ Extract Here ဆိုတာကတော့ အခုရှိနေတဲ့ နေရာလေးမှာတင် တစ်ခါတည်း ခွဲထုတ်လိုက်တာကို ပြောတာပါ။ နောက်ဆုံးနံပါတ်3အနေနဲ့ကတော့ ကျွန်တော်တို့ ခွဲတဲ့ အချိန်မှာ တစ်ခါထဲ ဖိုလ်ဒါလေးနဲ့ ထည့်ပေးလိုက်တာကိုပြောတာပါ။ အခုဆိုရင် ပထမဆုံးတစ်ပိုင်းကို ကျွန်တော်တို့ စပြီး ခွဲထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ကျန်တဲ့အပိုင်းလေးတွေလည်း တစ်ခါထဲပြေသွားပြီး တစ်စုတစ်စည်းထဲဖြစ်တဲ့ ဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ရလာပါတယ်။
အခုလို ခွဲထုတ်ပြီးရင်တော့ အပေါ်မှာ ဖိုလ်ဒါလေးနဲ့ ရလာပါပြီ။ ဒါကသမရိုးကျခွဲထုတ်ထားတဲ့ ဖိုင်လေးတွေကို ပြန်ဖြေထုတ်တာပါ။ နောက်ထပ် ထပ်ဆင့် ခွဲထည့်ထားတဲ့ RAR ဖိုင်လေးတွေကို ဖြည်တာကို ကျွန်တော် ပြပါ့မယ်။ အောက်မှာ ကြည့်လိုက်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ခွဲမှာ အခုလို ကောင်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဖိုင်တွေအများကြီးပါပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပထမဆုံးတစ်ပိုင်းကိုခွဲလိုက်ရုံနဲ့ ဒီကောင်လေးက အကုန်ပြေသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ပိုင်းခြင်းစီကို စဖြည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကြည့်လိုက်ပါဗျာ။
ကျွန်တော်တို့အခု အဆင်ပြေအောင် Extract Here နဲ့ပဲ ဒီနေရာလေးမှာပဲဖြည်ပါ့မယ်။ နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
ဖြည်တဲ့အချိန်မှာ Error တက်တာလေးတွေလဲရှိနိုင်တဲ့ အတွက် အကုန်ပြည့်စုံသွားအောင် Yes to All နဲ့ပဲ ပေးပါ။ ဒါကပထမဆုံးတစ်ပိုင်းပါ။ အခုဒုတိယတစ်ပိုင်းကိုထပ်ဖြေပါ့မယ်။
ဒါကတော့ ဒုတိယတစ်ပိုင်းကို ဖြေတာဖြစ်ပါတယ်။ Extract here နဲ့ပဲထပ်ဖြေပေးပါ။ခုနက ပုံလေးအတိုင်းပါပဲ။ Yes to All နဲ့ပဲ ထပ်ဖြေပေးပါ။
ကျွန်တော်အခုခွဲတဲ့ ဖိုင်လေးမှာ အားလုံးပေါင်း ၁၇ ပိုင်းရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီ ၁၇ ပိုင်းလုံးကို တစ်ပိုင်းခြင်းစီကို လိုက်ဖြေပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးကိုဖြေပြီးရင်တော့ နောက်ထပ် ၁၇ ပိုင်းအသစ်ထပ်ထွက်လာပါတယ်။ ပုံမှာကြည့်လိုက်ပါ။
အခုနောက်ထပ်ထွက် လာတဲ့ အပိုင်းတွေကိုချန်ပြီး ပထမဆုံးရှိနေတဲ့ အပိုင်းတွေကိုဖျက်ချင်လဲ ဖျက်လို့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဖျက်လိုက်ပြီဗျာ. အောက်မှာထပ်ကြည့်ပေးပါ။
ကျွန်တော်ကတော့ အဆင်ပြေအောင် မြှားပြထားတဲ့ ကောင်လေးနဲ့ တစ်ခါတည်း ဖိုလ်ဒါလေးနဲ့ တစ်စု တစ်စည်းထဲ ဖြစ်သွားအောင် ခွဲပါတယ်။ ကြည့်လိုက်ပါ။
အခုဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ဖိုလ်ဒါလေးနဲ့ တစ်စု တစ်စည်းထဲရလာပါပြီ။ ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါဗျာ။
အခုဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ အောင်အောင်မြင်မြင် Error မရှိပဲနဲ့ ထုတ်ပေးလိုက်နိုင်ပါပြီ။ Application SetUp ဖိုင်လေးတစ်ခုရယ် ကျွန်တော်တို့ Full Version လေးဖြစ်အောင်သုံးနိုင်မယ့် Crack ဖိုင်လေးကိုပါ RAR ဖိုင်လေးနဲ့ ရလာပါပြီ။ ကျွန်တော်ကတော့ ဒါမျိုးဖြစ်အောင်တော့ ခက်ခက်ခဲခဲခွဲမတင်ပေးပါဘူး။ ပထမနည်းလိုပဲ ပထမဆုံးတစ်ပိုင်းကို ခွဲရင် အကုန်ပြေသွားတာမျိုးဖြစ်အောင် ခွဲပေးတာ တွေပဲတင်ပေးပါတယ်။ ဒီလောက်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ မိတ်ဆွေများ အဆင်ပြေနိုင်လောက်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ နည်းနည်းလေးတော့ ရှည်သွားပါတယ်။ အားလုံးပဲ အခက်အခဲမရှိအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။အခု ပို့စ်လေးကို PDF ဖိုင်လေးနဲ့ပါထပ်ပြီးထုတ်ပေးထားပါတယ်။ အောက်မှာ ယူသွားလိုက်ပါဗျာ။
Win RAR အကြောင်း PDF
ကျွန်တော်အောက်မှာ RAR လေးနောက်ဆုံး ထွက်ထားတဲ့ Update လေးကိုပါထပ်ပြီး တင်ပေးထားပါတယ်။ အောက်မှာ နှစ်နေရာခွဲတင်ပေးထားပါတယ်။
phone win December 2, 2011 at 5:33 PM
thanzaw December 2, 2011 at 9:35 PM
Anonymous December 2, 2011 at 10:29 PM
lovemayor January 30, 2012 at 1:40 PM
ညီ လေးအတွက် Thanks ပါဗျာ :)
lional February 2, 2012 at 4:34 PM
thankalot brother .....
Anonymous June 4, 2012 at 10:39 PM
unknown August 26, 2012 at 9:11 AM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ၊ ကျွန်တော်နောက်ထပ်သိချင်တာလေးတစ်ခုကလေ ဟိုဟာပေါ့တချို့ဝက်ဆိုဒ်တွေမှာ iso fileတွေကိုအတိကျပြောရရင်4Gbလောက်ရှိမယ်ခင်ဗျာ။ အဲဒါကိုwinrarနဲ့ချုံ့လိုက်တာ9mbလောက်ပဲရှိတော့တယ် ခင်ဗျာ။ Youtubeမှာလဲ movieတွေရှာကြည့်တာတွေ့တယ်ခင်ဗျာ။ ဒါပေမယ့်ညီလိုက်လုပ်ကြည့်တာတော့မရဘုး ဘာမှားနေလဲမပြောတတ်ဘူးခင်ဗျာ။ ကျေးဇူးပြုပြီးအဲ့ဒါလေးကိုလဲ ရှင်းပြပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Nay Myo April 11, 2013 at 12:33 PM
shane April 19, 2014 at 12:49 AM
ဘယ်လိုပြောရမလဲနော်...စားရခါနီးမှ ပုတ်ချခံရတယ်ပဲလားမသိ..download link ၂ ခုစလုံးသေနေတယ်ဂျ....
Oo reh Owe Oo reh September 22, 2015 at 10:59 PM
Thank you so much for sharing about them. Enjoy with your job forever.
john thurain May 20, 2017 at 1:38 PM
win rar နဲ့ ဗီဒိယို၊ စာအုပ်ဖိုင်တွေကို ဘယ်လိုချုံ့ရမလဲ။ 1 ဂစ်ကို 100၊200 မီဂါဘိုက်လောက်အထိချုံ့လို့ရနိုင်မလား။ ရနိုင်မယ်ဆို ကျွန်တော့ကို ရှင်းပြပေးပါဦး။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။